Wadamadda Yuurb oo la walaacsan ukumo sumeeysan oo dukaamadda loo iib geeyey | Somaliska
Iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay aad saxaafadda u hadal heeysay ukumo sumeeysan oo dukaamadda Yurub loo iib geeyey, ayaa dalka Holland waxaa lugu xiray labbo ruux oo lagu tuhunsanyahay ineey ka dambeeyeen kiimikada laga helay ukumahaasi suuqyadda Yurub galay ee dalkaa laga dhoofiyey.
Booliska dalalka Holland iyo Beljim-ka, ayaa waxeey baaritaano ka sameeyeen guryo dalalkaasi ku yaala. Dacwad oogaha guud ee dalkaasi Holland ayaa sheegay in uu jiro nin maareeye ka ah shirkada la rumaysanyahay in ay u adeegsatay daryeelka digaagadaheeda walxo kiimidaad.
Daawada kiimikadaha ah ee Fipronil ayaa ah daawo loo adeegsado in digaaga looga ilaaliyo shilinta iyo cayayaanka kale, ayaa haddii daawadan xadigeeda la kiriyo islamarkasina la wado hadii muddo dheer, waxay halis caafimaad ku keenta aadanaha hilibka digaagaa cuna oo beerka iyo kiliyaha ay dhaawac u geeystaa. Daawadan ayaa sidoo kale waxeey tahay daawo laga mamnuucay in loo adeegsado daryeelka xoolaha.
Ugu dambeyntiina malaayiin xabo oo ukum ah ayaa laga qaaday dukaamada Yurub oo dhan, hase yeeshee waxay saraakiisha baaritaankaan ku hoowlansheegeen in khatarta caafimaad ee ka dhalan karta xaddiga kiimikadaas ah ee ku jira ukumahaasi ay aad u yar tahay.
Iska ilaali qiyaanada kirada guryaha magaalooyinka waaweyn
Guryo ku yaala Malmö oo xalay saq dhexe la xabadeeyey